Noho ny fahasahiranan’ireo ray aman-dreny amin’ny ankapobeny no mahatonga izany ka manosika ireo ankizy madinika handeha hitady vola sahady raha vantany vao tsy misy ny hohanina na ny kahie hampiasaina. Ho an’ny sekoly ambaratonga faharoa indray. 57 %-n’ny mpianatra ihany no mahavita manala ny fanadinana BEPC ao amin’ny kilasy fahasivy fa ny ankoatra izay dia raraka an-dalana avokoa. Ho an’ny ankizivavy ohatra, maro amin’izy ireo no lasa manam-bady tsy fidiny raha misy ihany koa ireo miroboka amin’ny asa an-tranon’olona. Fa ankoatra ny ray aman-drenin’ny mpianatra dia nomarihin’ny UNICEF manokana fa misy lesoka ihany koa any amin’ireo mpampianatra izay mandray an-tanana ireny mpianatra ireny. Ny 90 %-izy ireo mantsy dia tsy manana fahazoan-dalana hampianatra avokoa raha 30,5 % amin’izy ireo monja no mba mpiasam-panjakana.